Diyo post :: केके भयो ट्रम्प र किमबिचको शिखर वार्तामा ?छलफलदेखी संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षरसम्म ! केके भयो ट्रम्प र किमबिचको शिखर वार्तामा ?छलफलदेखी संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षरसम्म ! - Diyo post
केके भयो ट्रम्प र किमबिचको शिखर वार्तामा ?छलफलदेखी संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षरसम्म !
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन बिच भएको शीखर वार्ताले अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरु तात्तिरहेका छन । किम र उनको भेटवार्ताले अन्तराष्ट्रिय जगत पनि तरगिंत बनेको छ । सिंगापुरको होटल क्यापेलामा किम र ट्रम्प बिच करिब ५० मिनेट बताईएपनि ह्वाईट हाउसले भने ३८ मिनेट वान टु वान वार्ता सम्पन्न भएको बताएको छ । वार्ताको दौरानमा के सहमति भयो भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अमेरिकी संचारमाध्यमहरुले ट्रम्प र किमबिचको भेटलाई उत्तर विश्वशान्तिको कोसेढुङगाको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन । अमेरिका उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियारको उत्पादन बन्द गरोस भन्ने चाहन्छ भने उत्तर कोरिया आफ्नो देशमा लागेको नाकावन्दी फिर्ता गरि वाह्य लगानिकर्ताहरुलाई भित्र्याउन चाहन्छ जसबाट देशको आर्थिक स्थिति मज्वुत बनाउन सकियोस ।
उत्तर कोरिया र अमेरिका बिच बढ्दो तित्ततालाई यस शिखर वार्ताले पनि समाधान गर्ने विश्वास दुबै देशले लिएको छ । आईतबार नै सिंगापुर पुगेका दुई नेताहरु सिंगापुरको छुट्टाछुट्टै होटलमा बसेका थिए । मंगलबार किम र ट्रम्पले भेटवार्ता गरेका हुन । उनिहरुले भेट्दालगत्तै एक मिनेट सम्म हात मिलाएर कुरा गरेका थिए । केही बेरपश्चात ट्रम्पले किमको पाखुरा समाउदै अगाडी बढ्न आग्रह गरेका थिए । अमेरिकाको राष्ट्रपतिय चुनावलगत्तै किमसंग भेट गर्ने मनसाय बोकेका ट्रम्पले समसामयिक कारणवश भेट्न सकेनन । पछि लगातार रुपमा उत्तर कोरियाले अन्तराष्ट्रिय जगतलाई नजरअन्दाज गरि पटकपटक क्षेप्यास्त्र परिक्षण गरिरह्यो जसका कारण अमेरिका उत्तर कोरियासंग रुष्ट बन्यो ।
पछि उत्तर कोरियाली नेता किमले नै राष्ट्रपति ट्रम्पसंग वार्ताको प्रस्तावस्वरुप आग्रह गरि सन्देश पठाएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त आग्रहलाई स्विकारेपनि समयसमयमा नकारात्मक टिप्पणी दिँदै गर्दा वार्ता नहुने अभिव्यक्ति सम्म दिन भ्याएका थिए । केही समय पश्चातको अन्तरलामा अन्तराष्ट्रिय जगतलाई नै छक्क पार्ने गरि वार्ता सम्पन्न भयो ।
शिखर वार्तामा केके भयो?
सिंगापुरको सान्तोसा द्वीपमा क्यापेला होटलमा भएको उक्त भेट करिब ३८ मिनेटसम्म चल्यो । अब दुबै नेता आफूसँग आएका वरिष्ठ सल्लाहकार र सहयोगी दलसँग बैठक गरिरहेका छन् । अमेरिकाको तर्फबाट उक्त बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो, ह्वाइट हाउसका चीफ अफ स्टाफ जोन केली र सुरक्षा सल्लाहकार जोन बाल्टन देखिएका छन् ।यस्तै, अर्कोतर्फ उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उनसँग उनका नजिकका मानिने किम योंग चोलका साथै विदेशमन्त्री री योंग हो र पूर्व विदेशमन्त्री री सु योंग देखिएका छन् ।
शिखर वार्ता शुरु हुनु अगाडी ट्वीट गर्दै अमेरिकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफु किम संग वार्ताको लागी तयार भएको र उत्तर कोरियाले गर्ने आणविक परिक्षण त्यसबाट अमेरिकालाई पुगेका नोक्सानको बारेमा कुरा गर्ने बताएका थिए ।
शीखर वार्तापछि दुबै नेताले संयुक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन । ट्रम्पले परमाणुनिशस्त्रीकरणका विषय समेत समेटिएको उक्त दस्ताबेज ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण’ र ‘निक्कै विस्तृत’ भएको बताए । ट्रम्पले थप बोल्दै यस सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउनु उनी र किमको लागि ‘सम्मान’को कुरा भएको बताए ।
त्यस्तै किमले पनि संयुक्त वक्तव्यलाई ‘ऐतिहासिक’ उल्लेख गरे । उनले सहमतिपत्रको महत्वबारेमा बोल्दै भने, “विश्वले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख्नेछ” ।पत्रकारहरुसँग बोल्ने क्रममा ट्रम्पले आफू र ट्रम्पबीच ‘एक अति विशेष खालको सम्बन्ध’ विकास भएको बताए ।
दुवै देशका अधिकारीहरुले ट्रम्प र उनको भेटले सकारात्मक सन्देश दिने र वार्ताको परिणाम पनि सकारात्मक रहने बताएका छ ।
किम संगको वार्तापछि ट्रम्पले सिंगापुरका राजनितिक अधिकारीहरुसंग भेटवार्ता गरेका छन । दुबै नेता आजै स्वदेश फर्कने बताइएको छ ।